921 - 940 of1,937
Ndimandzi ngok wrote: Ndisisdudla esna18 ndfuna umntu for thsweek abemdala ozondiphatha njengecherry yake styane kubemandy ndiseHermanus shiya contacts ndzoxhumana nawe bt utande uzuma.... Cpt guis niph! Invite me on facebook sincokole... 2A7F8830
Hi ladies.ndise stay easy century city for tonight.kanenzeni torho
Satisfaction wrote: <quoted text>Invite me on facebook sincokole... 2A7F8830 awnagama and andinae bbm
bbes wrote: Kuyarhaleleka ukutyiwa ngumnntu ongamaziyo qha awazi noba lomntu wakhe wanxiba iisize zabantwana kwesisifo siphandlapha na coz kuthiwa babatywa abagulayo nam hey ndlela le ndibatywa ngayo besendizicingela ngenye imini ndoze ndibambe nenja le mmmmmm inyo emanzi esuzayo xa isenziwa istyle ndibhantse iimpundu mmmm i miss some1 endimfumene apha andimazi noba ngubani bt ndiyamfuna nyhani qha uyandizulisela akafuni kutyiwa sana yindoda enjani naleee i want u vaaaa ,ngaske ndikutye ngoku mna
Ngaske nditye uSugar mama mna ,ndim bhentsise
bbes wrote: Kuyarhaleleka ukutyiwa ngumnntu ongamaziyo qha awazi noba lomntu wakhe wanxiba iisize zabantwana kwesisifo siphandlapha na coz kuthiwa babatywa abagulayo nam hey ndlela le ndibatywa ngayo besendizicingela ngenye imini ndoze ndibambe nenja le mmmmmm inyo emanzi esuzayo xa isenziwa istyle ndibhantse iimpundu mmmm i miss some1 endimfumene apha andimazi noba ngubani bt ndiyamfuna nyhani qha uyandizulisela akafuni kutyiwa sana yindoda enjani naleee i want u vaaaa ngaske ndikutye bbe ndifake ezimpundu nase kukwini whole nyt lng
Ndimandzi ngok wrote: Ndisisdudla esna18 ndfuna umntu for thsweek abemdala ozondiphatha njengecherry yake styane kubemandy ndiseHermanus shiya contacts ndzoxhumana nawe bt utande uzuma.... Cpt guis niph! my number is 0610523066 koll me anytym pls i will wat u wnt frm CPT
Ndimandzi ngok wrote: Ndisisdudla esna18 ndfuna umntu for thsweek abemdala ozondiphatha njengecherry yake styane kubemandy ndiseHermanus shiya contacts ndzoxhumana nawe bt utande uzuma.... Cpt guis niph! dats my number koll me anytym 0610523066,we will tlk whm u koll,ndikubatyelwe
Khanyi wrote: Ndifuna indoda ezonditya Monday emini hi khanyi ndicela undi cll back kwezi no 0810535987 sizovana sobabini va
Andibatywe bethuna ndibukele iporn ndodwa, imilenze ndiyonekile, just a perfect way 4 me 2 unwind a hectic work day. Ba bekukho indoda bendizoyikhwela ndiyfake irharhaze'mqaleni.
Noni wrote: Andibatywe bethuna ndibukele iporn ndodwa, imilenze ndiyonekile, just a perfect way 4 me 2 unwind a hectic work day. Ba bekukho indoda bendizoyikhwela ndiyfake irharhaze'mqaleni. Undawoni na apha eKapa mna ndiseParkalnds
Noni wrote: Andibatywe bethuna ndibukele iporn ndodwa, imilenze ndiyonekile, just a perfect way 4 me 2 unwind a hectic work day. Ba bekukho indoda bendizoyikhwela ndiyfake irharhaze'mqaleni. hi noni uphi uze ukhe undizame kwezo no 081053587 sizo ncedana va
Noni wrote: Andibatywe bethuna ndibukele iporn ndodwa, imilenze ndiyonekile, just a perfect way 4 me 2 unwind a hectic work day. Ba bekukho indoda bendizoyikhwela ndiyfake irharhaze'mqaleni. ndiphazame my no is o810535987
Here is my bbm pin 2A7F8830 Noni , ndoyimunca ndiyitye wonele lookuku and andixoli ndingakuchamisanga ophuma njengalalo wangasese unchamo...
Makoti wrote: endingaphendulanga kubo sorry ke ne ndimfumene ona18 nona 43 so ndizoqala ngalo umdala ndize ngalo umncinci then if andonelanga ndizozokhangela ke kwakhona mmmmm I can't wait ukuravazwa ngumadala eyi bendikubawela ke makoti mna 35 my no is 0810535987 ba awonelanga va
Mthethi wrote: <quoted text>Undawoni na apha eKapa mna ndiseParkalnds me am stay at nyanga ngaske ndikukwele ngoku dlelale ndibatywe ngayo mna qala
ndifuna usisi omdalana ofuna ukutyiwa apha ejhb ndina 33
nana wrote: nothern suburbs ndifuna ukhothwa ikhoozo plz manje uhlala ndawon apha ekapa nana ngawushiye inumber yako ndizokufounela plz
cutelips wrote: How is this happeninig? cute lips ndinike inumbr yako sincokole sobabini uhlala ndawn
ndiyindoda nditshatile qa umfazi ndimbona ngeweekends ndifuna umntu onondipha phakathi neveki ndibatywa iveki yonke ashiye inumbr yakhe ndizomfounela ndihlala kwalapha ekapa not umntu othengisayo ndifuna umntu esizovisana kamnandi qha
Dr Samu 0784363389 Abortion Cilinic In Butterwo...
east rand springs sugardaddy
Total comments across all topics: 234,378,341